Himatni Dr. Mararaa Guddinaa adda cite-Obbo Geetachew Ambaaye hidhamtoota 528 himatni isaanii adda cite ni gadhiifamu jedhan. – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsHimatni Dr. Mararaa Guddinaa adda cite-Obbo Geetachew Ambaaye hidhamtoota 528 himatni isaanii adda cite ni gadhiifamu jedhan.
Himatni Dr. Mararaa Guddinaa adda cite
Abbaan Alangaa Waliigalaa Federaalaa Obbo Geetachew Ambaaye hidhamtoota 528 himatni isaanii adda cite ni gadhiifamu jedhan.
Hidhamtoonni hiikaman ulaagaa armaan gadii kan guutan ta’uus himanii jiru.
Heera mootummaa yookan sirna heera mootummaan hundaa’e diiguuf sochii godhame keessatti kan hin hirmaanne yookan hin gaggeessine.
Misoomawwan bu’uraa gurguddoo biyyattii irratti miidhaa geesisuuf sochii godhame keessatti kan hin hirmaanne yookan hin gaggeessine
Lubbuu namaa kan hin balleessine yookan miidhaa qaamaa cimaa kan hin qaqqabsiifne.
Sirnicha irraa fayyadamoo ta’anii osoo jiranii, namoota biraan kakaafamnii gara okkoraa fi jeequmsaatti kan galan.
Hidhamtoonni himatni isaanii adda cituufi dhiifamni godhamuuf warreen labsii farra shororkeessummaan himataman ni dabalata jedhaniiru Obbo Geetachew.
Hidhamtoonni ulaagaa armaan olitti erame guutan guyyoota lamaaf leenjii haaromsaa erga fudhatanii booda ni gadhiifamu jedhan.
Hidhamtoota 528 ni gadhiifamu jedhaman keessaa 115 manneen sirreessaa mootummaa federaalaan bulan jala kan jiran yoo ta’u, kanneen mootummaa naannoo jala jiran, murtee mootummaa naannoon raawwatama jedhan.
Namoota himatni isaanii adda cite keessaa tokko dura taa’aa KFO kan ta’an Dr. Mararaa Guddinaa ta’uu FBC gabaasee jira.
Dr. Maraaraa Guddina labsii hatattamaa jalatti wantoota tumaman cabsun yakkamanii bara 2016 ture kan to’annaa jala oolfaman.
Hanga yoonaatti mootummaan naannoo Uummattoota Kibbaa tarree maqaa hidhamtoota 413 dhiyeessee himata isaanii adda kutuuf murteessuu beksiseera jedhan.
Namoota hiikaman keessa hoggantoonni paartii mormituu jiruu jedhamanii kan gaafataman Obbo Geetaachew, guyyoota muraasa dhufan keessatti maqaan isaanii yoo ifa ta’u kan ilaallu ta’a jechuun deebisanii jiru.
Itoophiyaa keessa hidhamaan siyaasaa hin jiru jechuuunis cimsanii dubbatanii jiru.
Qajeelfama koreen hoji raawwachiiftuu ADWUI baase hojiitti kan hiiku koreen addaa dhaabbatuu isaa kan ibsan Obbo Geetachew, koreen kun karoora yeroo gabaabaa, jiddugaleessaa fi dheeraa baafatee hojiitti galuu himan.
Hidhamtooti siyaasaa akka gadi dhiifaman murtaa’e
‘Haqa dhabuun hiree hidhamtoota Oromoo ta’eera’ – Boontuu Baqqalaa Garbaa
Akkaatuma kanaan karoora yeroo gabaabaa jalatti kan hammatame, hidhamtoota dhiifamaan gadi dhiisuu fi kanneen himatni irratti baname himata isaanii adda kutuu yoo ta’u, dabalataan haala hidhamtoonni manneen sirreessaa fi buufataalee poolisii gara garaa keessa jiran itti qabaman foyyeessuunis karoorfamuu himan.
Hojii jiddugala qorannoo yakkaa Maa’ikalaawii jedhamee beekamu cufanii gara godambaatti jijjiiruu kan hojjetu koree addaa biraa ta’uus Obbo Geetachew beeksisanii jiru
Google marks Martin Luther King Jr Day https://t.co/Pe9iiCCGVM pic.twitter.com/Fbw1ToHtJd
Just in: State affiliated FanaBC reports #Ethiopia‘s Attorney General Getachew Ambaye says that charges against 528 detainees “have been dropped in the first round”; of these, 115 are individuals detained at federal prisons. pic.twitter.com/GjmTco5DSB
— Addis Standard (@addisstandard) January 15, 2018
Galanni kan gootota wareegamtoota keenynaati!
Hidhamtoonii keenya HUNDI iisaanii hikkamanii, wayyaanee lafa irraa dhabamtee biyyi keenya bilisoomtutti qabsoon itti fufa.